Otu esi etinye ihe nchọgharị Vivaldi na Debian 11 Bullseye - LinuxCapable
October 29, 2021 October 3, 2021 by Jọshụa James
Agbanyeghị, nke a adịghị mma, ma ị ga-eji ụzọ ndị a na desktọpụ Debian gị meghee ụzọ ahụ: Ihe omume > Gosi ngwa > Vivaldi. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
Na-esote, wepụ ebe nchekwa ahụ site na iji otu iwu dị ka ịgbakwunye "-r ọkọlọtọ."
Nke a ga-ewepụ ebe nchekwa Vivaldi, mee nke a ma ọ bụrụ na ịchọkwaghị ịwụnye ya ma emechaa.
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi ebubata ebe nchekwa Vivaldi n'ime ndepụta isi mmalite ma tinye ihe nchọgharị weebụ. N'ozuzu, Vivaldi bụ ezigbo mma ọzọ na Firefox na Google Chrome, na onye isi ya bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na Brave Browser. Agbanyeghị, Vivaldi nwere atụmatụ ndị ọzọ, Brave na-elekwasịkwa anya na nzuzo nke ndị ọrụ ya. Ihe ọhụrụ maka Vivaldi bụ njirimara njikwa taabụ; site n'ịhọrọ ọtụtụ taabụ, ị nwere ike itinye ha na "nchịkọta," nke na-echekwa ezigbo ala na ụlọ ahịa na taabụ. N'otu oge na nchịkọta, enwere ike "tiiled" taabụ, nke pụtara na ekewa mpio ihe nchọgharị n'etiti taabụ, na-ahapụ gị ka ị na-arụ ọrụ na ọtụtụ ibe weebụ n'otu oge.